Kabtanka Arsenal waa la sumeeyay, iyadoo dhibbanaha ugu dambeeyay uu yahay Pierre-Emerick Aubameyang. Iyada oo kaliya seddex gool oo Premier League ah uu dhaliyay xilli ciyaareedkan, Aubameyang wuxuu la dhibtoonayaa qaab ciyaareed iyo kalsooni halka uu qirey inay adkaan doonto dhiirigelinta asxaabtiisa.
Aad ayey iigu adag tahay aniga inaan isku daro shaqsiyan iyo kabtanimadeyda laakiin waa inaad rajo ka qabtaa in kooxda ay kuu baahan tahay. ” ayuu 31 jirka u sheegay Sky Sports.
“Marwalba waxaan iskudayaa inaan sameeyo sida ugu fiican, kaliya ma ahan garoonka dhexdiisa laakiin sidoo kale qolka labiska, mararka qaar way adagtahay maxaa yeelay jawiga ayaa jahwareersan laakiin waa inaan badalaa oo aan ku abuuraa jawi wanaagsan qolka labiska.
Arsenal ayaa heysata farxad ka yar xilli ciyaareedkan iyagoo leh 14 dhibcood 14 kulan oo ay ciyaareen, taasoo ka dhigeysa natiijadooda ugu xumeyd tan iyo xilli ciyaareedkii 1974-75.
Inkasta oo kooxda Mikel Arteta ay badisay afartii kulan ee ugu dambeysay oo xiriir ah tartamada oo dhan, Aubameyng wali ma uusan sameyn.
Sida uu xiddiga reer Gabon u noqday kabtanka ayaa ahayd mid muran badan dhalisay, iyada oo tababarihii hore ee Unai Emery uu ka saaray kabtanka Granit Xhaka isla markaana ay isku dhaceen taageerayaasha halka Mikel Arteta markii uu yimid uu go’aansaday in Aubameyang uu sii ahaado kabtan.
Laakiin maadaama Aubameyang uusan haatan dooneynin inuu sii ahaado kabtanka kooxda, waxaa jira seddex musharax oo bedeli kara.
Hector Bellerin kii ugu horreeyay, ee daafaca midig ka ciyaara laacibka reer Spain ee labaad ee ugu waqtiga dheeraa Arsenal Ozil, ayaa kaliya kooxda la joogay lix sano. Haatan waa kabtan ku xigeenka Aubameyang, oo uu aad u jecel yahay Wenger iyo Unai Emery hadana uu jecel yahay Mikel Arteta.
Rob Holding, oo uu soo saaray Arsene Wenger, waa ciyaaryahan kale oo noqon kara hogaamiyaha kooxda. 25 jirkaan, oo dhawaan saxiixay qandaraas cusub, waa hogaamiyaha difaaca wuxuuna had iyo jeer dhiiri galiyaa ciyaartoyda mana ka labalabeeyo markay wax qaldamaan.
Kieran Tierney, oo kaliya kooxda joogay 18 bilood, waa ciyaaryahanka kaliya ee noloshiisa khadka dhigay kulan kasta. Halyeeyada Gunners sida Ian Wright ayaa Tierney ku tilmaamay asal hidde iyo kabtan mustaqbal ah.
Kenyan police prosecute al-Shabaab activists